Guatemala: Diso Hevitra I Picasso Ho An’ny Mpanakanto Sasany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2017 18:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, македонски, English
(Marihina fa tamin'ny 3 Jolay 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nilaza i Pablo Picasso ,ilay heverina ho iray amin'ireo mpanakanto lehibe indrindra hatramin'izay, fa “Tsy misy ilàna ny solosaina. Ny valiny ihany no omeny anao “. Na izany aza, efapolo taona taorian'ny fanambarana toy izany, ny solosaina sy ny Aterineto no fitaovana ampiasain'ny mpanao hosodoko Goatemalteka ary mampiantrano ny fampirantiana amin'ny hoavy.
Maro amin'ireo mpanakanto no mipetraka sy manao hosodoko any ivelany. mampiasa ny bilaoginy izy ireo ho sehatra aseho amin'ny hafa ny sanganasany sy hitazomana ny fifaneraserana amin'ireo vondrom-piarahamoniny.
Sebastián Sarti dia Goatemalteka fa teraka tany Costa Rica, toerana nandefasana ny rainy izay Goatemalteka an-tsesitany ary nanambady ny reniny Pôrtô Rikana. Tao Nicaragua izy no lehibe ary nipetraka nandritra ny fotoana fohy tao Goatemalà, ary amin'izao fotoana izao izy manoka-tena ho amin'ny hosodokony ao Aix sy Marseille. Mizara ny sanaganasany ao amin'ny bilaoginy manokana El Desorden de la Cabeza [es] (Ny Korontana Ao An-dohako) izy.
Ilay mpangala-biby avy amin'i Sebastian Sarti.
Mipetraka ao Brooklyn, NYC, manan-talenta maro hozaraina amin'ny mpamakiny i Juan Carlos avy any Historiando [es]. Mpandoko sady mpikatroka, mampiasa ny sanganasany hanaovana fampirantiana ao amin'ny trano fampirantiana zavakanto izy sy any amin'ny fihetsiketsehana ihany koa. Namorona ny afisy lehibe ho an'i John Lennon izy amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo tapakila nohavaozina avy any amin'ny metro, mba ho fanoherana ny saram-pitateram-bahoaka lafo ao New York . Ho hitanao ato amin'ity rohy ity ny sasany amin'ireo fampirantiana nataony.
Asakanton'i Juan Carlos
Mpanao hosodoko manan-talenta i Elvira Méndez, monina ao Antigua, Guatemala ary mizara ny sanganasany amin'izao tontolo izao. Ny bilaoginy Pintura [es] (Hosodoko) mampiseho ny tahirin'hosodoko, sady maneho ny tenany amin'ny alàlan'ny karazana, loko, ary endrika samihafa.
Famoronan'i Elvira Méndez
Poety, mpanakanto sady mpanao famoronana hosodoko ihany koa i Alejandro Marré araka ny asehon'ny bilaoginy Arte Marré. Nafangaro sy nasiana fanamboarana ny santionany tamin'ny kolontsaina Pop mba hahazoana vokatra toy izao:
Fitsangatsanganana nataon'i Alejandro Marré
Any Montmartre i Erick González, ilay toerana izay nofinofisin'ny mpanao hosodoko eto amin'izao tontolo izao. Mamorona asakanto mahaliana izy, maneho ao anatin'ny sary amin'ny alalan'ny fitaovana nohavaozina izay mampifanohitra ny lohahevitra sarotra indrindra ao Guatemala izy, manomboka amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ka hatrany amin'ny fitomboan'ny isan'ny mpiambina sy ny basy. Mampiantrano tsikera sy sary maro momba ny hosodokony ny bilaoginy [es].
Indro ny santionany:
Vokatra Aho avy amin'i Erick González
Vitsy ny toeram-pampirantiana sy seha-bahoaka ho an'ny tanora mpanakanto ao Guatemala mba hanehoana ny asany. Vitsy ihany koa ny loharano hahazoana fanasana fampirantiana ary zara raha manasongadina mpanakanto tsy dia fantatra loatra ireo mpaneho hevitra (tsikera) ara-javakanto . Noho izany antony izany, ny bilaogy dia manome fahafahana ho an'ny tanora mpanakanto mba hanehoana ny asakantony, hanehoany ny heviny sy hizarany ary hifandraisany amin'ireo mitsidika ny tranonkalany mba hijery ny sombiny amin'ny zavakantony.
Nahazoana alalana avy amin'ny lisansa Creative Commons ny sary rehetra.